Kooxda Sevilla Oo Xiiseyneysa Xidiga Liverpool Takumi Minamino.
HomeHoryaalka IngiriiskaKooxda Sevilla oo xiiseyneysa xidiga Liverpool Takumi Minamino.
February 17, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda Sevilla ayaa muujineysa xiisaha ay u qabto xidiga kooxda liverpool ee Takumi Minamino oo xiligaan amaah ugu joogo kooxda ingiriiska ka dhisan ee Southampton amaahda kaga maqan waxay xiiseyneysaa Minamino sida laga soo xigtay Fichajes.
Kooxda La Liga ayaa muddo dheer xiiseyneysay 26 jirka, kaasoo Reds ay haatan ku qiimeeyaan ku dhawaad 10 milyan euro waxaase la ogeen in liverpool ay iska iibineyso wearyahankan laakin Reds hadii miiska loo soo saaro lacago waali ah ineey iska iibiyaan.
Minamino ayaa inta ka hartay ololaha 2020-21 amaah ku qaadanaya Southampton, laakiin waxaa lagu heli doonaa heshiis joogto ah xagaaga soo aadan.